Simone Biles Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Simone Biles Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Simone Biles Biography inokuudza chokwadi nezve yake yehudiki nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Biological Vabereki (Shannon Biles naKelvin Clemons), Hupenyu Hwemhuri, Vabereki vekurera (Nellie naRonald Biles), Hupenyu hwerudo.
Kunyanya zvakadaro, maAmerican Athlete's Siblings (Ronald Biles Jnr, Adam Biles, Adria, Ashley, naTevin), Net yakakosha, Mari, Hupenyu hweMunhu uye Hupenyu. Muchidimbu, tinokuunzira pikicha yakazara yeiyo Hupenyu nhoroondo yaSimone Biles, muAmerican mhizha jimunasiti.
Yedu Biography inotanga kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika ave zita remumba mune rake jimunasiti basa. Nekudaro, kuti utore chimiro chako cheBiography, isu tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza Hupenyu hwaSimone Biles.
Simone Biles Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pakuzvarwa kusvika pakubudirira kwake.
Ehe, isu tinomuziva iye semujimujimu ane menduru dzePasi rose, makumi maviri neshanu. Naizvozvo, isu takaona zvakakodzera kuti tikushandire iwe inonakidza uye inonakidza nyaya yaSimone Biles uye nekuparara kweyemitambo ruzivo kusvika zvino. Zvino, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Simone Biles Yehucheche Nyaya:
YeVatangi veBiography, Simone Arianne Biles akazvarwa munyika ino pazuva regumi nemana raKurume 14 kuvake veBeological Vabereki (Shannon Biles naKelvin Clemons) muColumbus, Ohio, US
Yedu nhoroondo yeAmerica akazvarwa semumwe wevana vana mukoma. Simone Biles ndiye wechitatu pakati pehama dzake. Kunyange zvakadaro, iye nevanin'ina vake vakasara kuti varere vega naamai vavo, Shannon Biles.
Zvakapesana, amai vemujimu, Shannon Biles, aisakwanisa kuchengeta Simone Biles nevamwe vanin'ina vake- Ashley, Tevin naAdria. Vese vari vana vaipinda nekubuda mukurerwa. Pazasi pane mufananidzo wekuzvarwa kwaSimone Biles-Vabereki, Shannon Biles naKelvin Clemons.
Tarira amai vaSimone Biles-amai, Shannon Biles uye baba vake veKuberekwa, Kelvin Clemons.
Amai vaSimone Biles, Shannon Biles, vakatambura nekushandisa zvinodhaka uye doro nekuda kwekuva amai vasina murume nevana vekudzidzisa. Aigara achipinda uye achibuda mutirongo. Nekuda kwedambudziko remhuri, Simone Biles, sezvaanotaura, haana kumbobvira ave nemhamha wekumhanya kuzogovana rudo rwake.
Saka nekudaro, aive achisiya musikana mudiki pamwe nevanin'ina vake kuti vagare mune nzara uye kutya. Nekudaro, pa3, semwana mudiki, akaiswa munzvimbo yekurerwa. Muna 2000, sekuru vaamai vaBiles, Ronald Biles, nemukadzi wake wechipiri, Nellie Cayetano Biles, vakaziva kuti vazukuru vake vanga vari mukurerwa.
Mufananidzo wekutanga weSimone Biles.
Nekudaro, ivo vakatanga kwenguva pfupi kuchengeta vana vaShannon kuchamhembe kweHouston suburb yeSky, Texas. Makore maviri gare gare, Simone Biles akagamuchirwa pamwe chete nemunun'una wake, Adria Biles, nasekuru nasekuru vake (Nellie naRonald Biles).
Kune rimwe divi, hanzvadzi yaRonald, amainini vaShannon, Harriet, vakatora vana vaviri vakuru. Kubva pakutanga, Simone aive mwana anoshingairira, achisvetuka achimhanya kwaaigona. Simba rake rechisikigo uye simba rakakwira rakaiswa pamwe neyakajairika degree rekushinga kwemuviri.
Mufananidzo wakajeka waSimone Biles akatakurwa naShannon, nevamwe vanin'ina vake, Tevin naAshley.
Kuda kwake gymnastics kwakatanga mushure mekufamba kwemunda kuenda kujimu pa6 nevabereki vake. Simone aibudirira kutevedzera zvinoitwa nevasikana vachiri kuyaruka.
Semunhu anoita gymnast, akatanga kuzvidzidzisa kufuratira kumashure kubva kumabhokisi etsamba. Ona Simone Biles taura nyaya yake nemutambi ane mukurumbira, Sasha Waltz, mune clip iripazasi.
Simone Biles Mhuri kumashure:
Asati agamuchirwa, Iye wekuAmerican jimunasiti, pamwe nevamwe vanin'ina vake uye amai, vaigara mugehena. Vakatambura nekushaikwa kwezvinodiwa zvakakosha, kushomeka kwekudya zvinovaka muviri uye dzakasiyana nzira dzekushungurudzwa kwevana. Kusavapo kwemari chave chikonzero chakakosha.
Nekudaro, nevabereki vatsva vaSimone Biles, akaponeswa, sezvaanotaura. Iye nevanun'una vake vakaponeswa kubva pahurombo nenhamo. Mari yakanga isiri nyaya mumusha wake mutsva. Vabereki vake vatsva, Nellie naRonald Biles vaive vakapfuma vaviri.
Pix yehucheche yaSimone Biles nababa vake vakapfuma, Ronald Biles uye munin'ina wake, Adria.
Simone Biles Mhuri Kubva:
Kuenda kumadzitateguru ake, Simone Biles, sezvakaitika kare, akazvarwa muguta rine vanhu vakawanda muOhio, US, inozivikanwa seColumbus. Taigona kunge takati anobva kuOhio. Zvakangodaro, akagamuchira mavambo evabereki vake vatsva (Nellie naRonald Biles).
Simone Biles nemhuri yake nyowani vanobva kuguta-rakatarwa revanhu mukati mekunze kweHouston inonzi Chitubu muTexas, US Contrariwise, Simone Biles zvakare ane hukama hweBelizean kuburikidza naamai vake vokurera. Anoreva Belize semusha wake wechipiri.
Iye zvekare wedzinza revatema. Naizvozvo, nekureva kweruzivo rwuri pamusoro, Simone Biles ndeye Africa American anobva kuTexas kuUS uye Belizean Citizen. Ona zvinyorwa zvemadzitateguru ake mumufananidzo pazasi.
Mifananidzo yekuratidzira yemhuri yaSimone Biles.
Simone Biles Ekutanga Basa:
Citizen yeBelizean yakatanga kuyedza jimunasitikisi pamatanhatu sechikamu cherwendo rwemunda-rwekuchengetedza munda. Panguva iyo varairidzi vakati aenderere mberi nejimnastics. Nekudaro, maBiles munguva pfupi akanyoreswa muchirongwa chekuzvipira paBannon's Gymnastics. Akatanga kudzidziswa nemurairidzi Aimee Boorman pa8.
Zvichienderera mberi, Simone Arianne Biles akatanga basa rake repamusoro aine makore gumi nemana pazuva rekutanga raChikunguru 14, kuAmerican Classic muHouston. Mushure meizvozvo, akabuda wechitatu zvachose. Simone Biles yaive yekutanga pane vault uye chiyero danda, tevera rechina pauriri kurovedza muviri.
2002 Simone Biles aine makore matanhatu aine hanzvadzi diki, Adria paakatanga jimunasiti.
Chechitatu, aive wechisere pamabhawa asina kuenzana. Kunyanya gare gare mwedzi iwoyo, Biles akakwikwidza ku2011 US Classic muChicago, Illinois, kwaakaisa 20th zvakazara, yechishanu pachiyero cheyadhi uye pasi kurovedza muviri.
Biles 'kutanga kusangana (koreji makwikwi) e2012 yaive iyo American Classic yakaitirwa muHuntsville, Texas. Akabuda pekutanga mune zvese uye pavhavha, akasungirirwa wechipiri pachivharo chepasi, akaisa chechitatu pachiyero chebharani, ndokuzochina pamabhawa asina kuenzana. Yakaratidza kutanga kwemazuva ari nani anouya.
Simone Biles Dzidzo:
Mu2012, Biles akachinja kubva kuruzhinji chikoro kuenda kumba chikoro, achiwedzera kudzidziswa kwake kubva kumakumi maviri kusvika makumi matatu nemaawa vhiki imwe neimwe. Simone akawana zvese zvesekondari semudzidzi wepamba, akapedza kudzidza muzhizha ra20.
Biles nemuromo akaronga kuenda kuYunivhesiti yeCalifornia, Los Angeles (UCLA) musi wa4 Nyamavhuvhu 2014. Kunze kwaizvozvo, akaronga kudzosa kunyoresa kusvika mushure ma2016 Olimpiki yeZhizha muRio de Janeiro.
Zvisinei, munaNovember 2014, akasaina National Tsamba Yenangwa nedare repamusoro. Muna 2015, Simone Arianne Biles akazivisa kuti achashandura hunyanzvi ndokusiya yake NCAA kukodzera kukwikwidza UCLA.
NCAA - National Collegiate Athletic Association - iro basa rayo kuronga nekumisikidza mitemo yemitambo yakasiyana uye nzira yekukodzera yevatambi. Kunyangwe zvakadaro, muna Ndira 2018, maBiles anoshumwa kunge akanyoresa kuYunivhesiti yeVanhu.
Iyo institution iko online koreji, kwaakadzidza bhizinesi manejimendi uye aizove muyunivhesiti wechiratidzo mumiriri.
Yepamhepo koreji, kwaakadzidza manejimendi manejimendi uye ave mumiriri wechiratidzo cheyunivhesiti.
Simone Biles Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Kuiswa kweBiles muAmerican Classic kwakamuchengetera nzvimbo yekukwikwidza mu2012 USA Gymnastics National Championship. Moreso, akazokwikwidza ku2012 US Classic muChicago.
Mabhara akapedza kutanga pamativi ese uye pavhavha, yechipiri paburiro rekudzidzira, uye chechitanhatu pachiyero chebharanzi. Zvishoma nezvishoma, muna Chikumi, mutambi ane tarenda akaonekwa kechipiri kuUS National Championship kuSt. Louis, Missouri.
Simone Biles anoita kumatare eU.S.Olympic muSt.
Akapedza chechitatu kunhivi dzese, kutanga pachivako, uye chechitanhatu pamabhawa asina kuenzana, danda rekuyera, uye kurovedza muviri pasi. Mushure mekuita uku, Biles akatumidzwa zita kuUS Junior National Team nekomiti inotungamirwa naMárta Károlyi, weNational Team Coordinator.
Simone aive mudiki kwazvo kuti akwanise kuenda kumaOlimpiki eLondon a2012 uye nekudaro aisakwanisa kutora chikamu. Nekudaro, aive anodikanwa pakupinda muMitambo ye2016 muRio de Janeiro. Akararama maererano nezvaitarisirwa, achitungamira United States kugoridhe muchiitiko chechikwata uye kuhwina munhu pazvinhu zvese.
Simone Biles Biography- Kumuka Mukurumbira:
Muna Kurume, Biles 'mukuru wepasi rose dhodhi akaitika pa2013 American Cup, chiitiko cheFIG World Cup. Iye naKatelyn Ohashi vanotsiva Elizabeth Price uye 2012 menduru yegoridhe yeOlimpiki, Kyla Ross, uyo akabva mumakwikwi nekuda kwekukuvara.
Simone akatungamira kutenderera kumwe mushure mekudonha padanda asi akapedza wechipiri kuseri kwechikwata chake, Ohashi. Mabira akabva azove akanyanya kushongedzwa mukadzi jimunasiti munhabvu yepasirose nhoroondo. Simone akahwina goridhe ina (kusanganisira rimwezve zita rinosanganisira zvese) uye sirivheri imwe.
Ndiye akanyanya kushongedzwa mukadzi jimunasiti muAmerica.
Moreso, akabhejera imwe yendarira mumakwikwi e2018 kuti aunze basa rake rese pamakwikwi aya kumamedhi makumi maviri. Biles akaenderera mberi nekugadzira nhoroondo mugore rese ra 20. Kumakundano epasi rose egore iro, akabuda semunhu anoita jimunasiti kubheja menduru dzegoridhe shanu mumakore anopfuura makumi matanhatu.
Uye zvakare, Simone Biles akapfuura Vitaly Scherbo weBelarus kuti ave jimunasiti nemakwikwi epasirose epasirose (25). Zvakare, mu2019, akahwina mibairo mishanu kumakwikwi eUS emunyika, mana acho aive egoridhe.
Pa2021 Classic muU. S, akazove mukadzi wekutanga jimunasiti kumisikidza chivharo chemutambo chakanyanya kunetsa, iyo Yurchenko pike mbiri, mumakwikwi. Gare gare gore rimwe chete, akakwikwidza kumakwikwi eU.S.
Akatora yake yechinomwe yese-inosanganisira kukunda. Moreso, achibuda achikunda mamwe matatu menduru dzegoridhe uye imwe yendarira.
Simon Biles anoita nhoroondo neYurchenko pike mbiri kuUS Classic 2021.
Simone Biles - 2020 yeOlimpiki chiitiko:
Iyo 2020 Tokyo Olimpiki yakanonoka nekuda kwedenda reCovid-19. Nekudaro, makwikwi akaitika kubva munaChikunguru kusvika Nyamavhuvhu 2021. Tarisiro yakakwira yeBiles yakawedzera paakapinda muMitambo yeTokyo ya2020.
Mune zvese izvo, Simone Arianne Biles akasiya zviitiko zvakawanda nekuda kwe "twisties." Iyo mamiriro ezvinhu epfungwa block mune ma jimunasiti anorasikirwa nemamiriro avo epakati panguva yekufamba kwemuchadenga.
Kuchengeteka kwake kwaive panjodzi - danho rekusakwikwidza rakamutsa nhaurwa nezve kumanikidzwa kunoitwa nevatambi nekunetseka kwavo kwehutano hwepfungwa. Nekudaro, takaziva kuti tete vake vakapfuura vasingatarisiri.
Murairidzi waSimone, Cecile Canqueteau-Landi, akati mutambi uyu akawana mashoko aya achangopedza kuita danda. Pakati pazvo zvese, Simone Biles akadzoka kuzoti bharanzi pachiitiko chekupedzisira, kuhwina menduru yebronze.
Zvisinei nekutsamwa kunoparadza, Simone nevamwe vake, Jordan Chiles Grace McCallum, uye Sunisa Lee vese vainyemwerera.
Ndiani Simone Biles Kufambidzana?:
Iye ane tarenda jimunasiti anga achidanana neNFL - National Nhabvu Nhabvu nyeredzi Jonathan Owens kubva munaKurume 2020. Ivo vaviri vanoonekwa pamasocial media vachitaridzika nerufaro murudo. Unogona here kufungidzira kuti vaviri vacho vakasangana sei?
Ehe, kufambidzana maapplication anoshanda; vaviri vacho vakasangana kuburikidza neiyo Raya app mu2020. Uye, zvinotyisa, mutambi weNFL haana kuziva kuti menduru yegoridhe ndiani. “Ndakatsvedza mune yake DM, ” Simone akaudza Wall Street Journal Magazine.
Simone Biles nerudo rwehupenyu hwake, Jonathan Owens.
Iye akaona uye akamuda, saka akati hesi. Pamusoro peizvozvo, Jonathan Owens aigarawo munzvimbo yeHouston. Saka, vachikurukura zvishoma, uye ivo ndokuenderera kune imwe hangout.
Uyezve, Adria, munin'ina waSimone, akabatsira kusundira hukama. Nguva pfupi yapfuura, Simone naJonathan vakazvirova kuburikidza neFaceTime. Aive Adria aikoka iyo NFL nyeredzi kumhuri yezororo panzvimbo yaSimone. Mushure mezvo, Owens akatanga kujoina mhuri yeBiles vhiki nevhiki yekudya kwemanheru.
Zvimwe pamusoro pake Simone Biles Mukomana - Jonathan Owens:
Mutambi weNFL akakurira muSt. Louis, Missouri, uye akatamba nhabvu kuMissouri Western State University. Akabatana neNFL muna 2018 sekuchengetedzwa kweArizona Cardinals. Owens akasaina naHouston, Texas, muna 2020 uye parizvino anogara kuTexas (sezvinoita Biles, akakurira mudunhu).
Ivo vaviri havana kunyara kugovana rudo rwavo. Pa Instagram, muna Nyamavhuvhu 2020, Biles naOwens vakachengeta mafeni avo kumusoro-kuhukama pahukama hwavo. Ivo vane kuyerera kwakadzikama kwemaviri mapikicha, kubva kune yavo selfies kuenda kuzororo pics kune yavo yegore uye zuva rekuzvarwa mutero.
Ivo vaviri vanofadzwa nemumwe uye havanyare nezvazvo.
Vatambi vaviri ava vakataura zvakanyanya nezve mumwe nemumwe, kunyangwe kune vezvenhau. Mubvunzurudzo neTexas Monthly, Jonathan Owens akareurura, "Zvino ndinotenda zvikuru." Akaenderera akati, "Uyu mutambo wakaitwa kudenga. Hapana mumwe munhu ari nani kwandiri.
Anondikoshesa, uye anondida kwazvo. "Zvinongodhakisa kushanda kwaanoisa muzvinhu zvese." Vaviri vacho vanotsigira zvakanyanya mabasa emumwe neumwe. Munguva yehurukuro naHoda Kotb, Biles akati nezvaOwens, “Iye murume chaiye. Ndinoyemura iye.
Tine nguva yakanaka pamwe chete. Hunhu hwedu hunofanana. ” Tine pfungwa imwechete yekuseka. Jonathan Owens mutambi, zvakare, saka kunzwisisana kwave kusina musono.
Simone Biles Hupenyu Hwemhuri:
Olimpiki jimunasiti Simone Biles ave nerutsigiro rwakakura kubva kunhengo dzeimba yake mukati memakore ake semutambi wepamusoro. Nekudaro, imba yake inoita kunge isingabvumirane, sevamwe vazhinji.
Rukudzo rwakakodzera runofanirwa kuenda kunyanya kuvabereki vake vatsva. Panguva ino, ngatitarisei zvakanaka nhengo yega yega yemhuri yake.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Simone Biles Baba - Kelvin Clemons:
Baba vekubereka vaSimone, Kelvin Clemons, anga asingataure nemwanasikana wake makore ese aya. Kunyangwe asiri muhupenyu hwemutambi, iye anoziva nezvekubereka kwake kuna Simone Biles. Kelvin Clemons, seakadaro, anofara nekubudirira kwake uye anodada naye.
Zvizhinji nezveSimone Biles Amai - Shannon Biles:
Amai vaSimone vemuzvarirwo, Shannon Biles, akaomerwa nekusiya vana vake. Zvisinei nehupenyu hwake hwekushungurudza pamishonga, aida kuchengetedza tarisiro yevana vake vana. Nekudaro, nerombo rakanaka, kana kwete, kunyangwe zvainetsa, aifanira kuzviita. Akanga asingakwanisi kuvachengeta. ”
Yekupedzisira pikicha yaShannon Biles.
Mukupesana, Shannon Biles anga akasvinura kubvira 2007 uye akashanda semubatsiri-wekubatsira pamba. Kubva parizvino, iye anotaura naSimone nguva zhinji asi nehurukuro pfupi. Iyo inogara iri hurukuro pfupi senge 'Ini ndakusuwa, ndinokuda, handigoni kumirira kukuona, ndinodada newe' Shannon anoshuma.
Zvizhinji nezveSimone Biles Vabereki Vatsva - Nellie Biles:
Nellie Cayetano Biles akazvarwa pazuva re18th raKukadzi 1950. Vabereki vake vaive Silas Cayetano naEvarista Cayetano. Iye ndiye mbuya vaamai vaSimone. Kuchengeta kwake uye kuda kwake muzukuru wake kwakatungamira mukumutora kwake Simone Biles semwanasikana.
Cayetano ndeye Belize madzitateguru. Iye anobva kumutsara murefu wevakuru vehurumende yeBelizean. Nellie mukoti ane hunyanzvi aive muridzi uye aibata tambo yemisha yevanotarisira munzvimbo yeHouston.
Mufananidzo unofadza waSimone Biles naamai vake, Nellie Biles.
Iye nemufaro akaroora yake yenguva refu date, Ronald Biles, muna 1977. Ivo vaviri vakasangana muSan Antonio. Parizvino, kunze kwaSimone nemunin'ina wake, Adria, vane vanakomana vaviri, Ron Biles Jr. naAdam Biles.
Mitambo yeTokyo 2020 ichave kekutanga Nellie naiye hubby, Ronald, vasipo. Kusavapo kwavo kunokonzerwa nedenda reCovid-19. Kunyangwe Simone ainetseka nazvo pakutanga, Akaramba achisangana padyo neMitambo.
Nellie akagovana rudo rwakasimba kumwanasikana wake, Simone Biles.
Zvizhinji nezveSimone Biles Vabereki Vatsva - Ronald Biles:
Kazhinji anonzi Ron, ndiye sekuru baba vababa kuna Simone Biles. Kunyangwe akashandura baba vake, rudo rwakatsiga rwaRonald Biles nerutsigiro zvave zvakakodzera kutevedzera.
Zviito zvemutsa zvekurerwa hazvina kungonunura izvo zvingangodaro zvave kurasikirwa nedanho asi zvakare zvakakurudzira vazhinji. Ron murwi weVarwi veMhepo uye aimbova mutyairi wemhepo traffic.
Ronald Biles, nemukadzi wake, Nellie nemwanasikana, Simone Biles.
Pamwe chete nemukadzi wake, Nellie Cayetano Biles, vane yavo jimunasitikisi nzvimbo. Iyo Yevatema-ndeyavo yekurovedza muviri inopa akasiyana akasiyana makirasi uye kudzidziswa kwematanho ese uye mazera. Vana, zvakare, vanouya vodzidzisa. Basa rayo rinokurudzira chizvarwa chinotevera kuteedzera chishuwo chavo.
Uye, hongu, Simone anodzidzisa ipapo. Sezvazvinozivikanwa, iyo World Champions Center iri 56,000 mativi tsoka uye mutaundi repamba raSimone reChitubu, Texas.
Iyo jimunasiti nzvimbo ndeyevabereki vaSimone.
Zvimwe Pamusoro paSimone Biles Vanun'una:
Mudiki Champ ane vanin'ina vashanu zvachose. Simone ane vanin'ina vatatu kubva kumba kwake kwekutanga uyezve vamwe vaviri kubva kumba kwake kutsva. Vanun'una vemajimunasiti vanosanganisira Ronald Biles Jnr, Adam Biles, Adria, Ashley, naTevin. Uye zvakare, Simone ndiye wechishanu pakati pehama dzake dzese.
Iyo yakanaka pix yeiye ane tarenda jimunasiti nevanin'ina vake.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Simone Biles Vanin'ina - Adria:
Adria ari muchikoro chemazino uye aine chinangwa chekushanda sewehutsanana nyanzvi. Sezvineiwo, iye zvakare aimbove jimunasiti iye. Adria akatanga aine makore mapfumbamwe uye akapedzisira akwikwidza padanho repamusoro revadiki.
Adria akatodzidziswa naSimone kusvika 2016. Vakapedzawo nguva vari pamwe muhurongwa hwekurera vasati vatorwa nevabereki vavo, Ronald naNellie, Simone aine makore matanhatu naAdria, 4. Adria akadana Simone shamwari yake yepamwoyo.
Mufananidzo wemhuri wakatorwa pakupedza kwaAdria kukoreji.
Zvizhinji nezveSimone Biles Hama:
MuAmerican jimunasiti uye mugari weBelizean vane dzimwe hama. Simone Biles ane mashoma emhuri yake akawedzera parutivi nevabereki vake, sehama nasekuru, nasekuru nasekuru.
Sezvambotaurwa, vanasekuru naamai vake vanobva kuBelize. Anoreva mazita ndiSilas Cayetano uye Evarista Cayetano. Iye zvakare ane mainini Harriet, avo vakambotora vamwe vanun'una vake, Ashley naTevin.
Simone Biles Hupenyu Hwega:
Kunze kwejimnastics, Simone anoda zvimwe zvinhu zvakawanda. Kuda kwake imbwa hakuna kutya. Kuda imbwa kwaive zvakare kwekubatanidza pakati pejimunasiti nemukomana wake, Jonathan Owens.
Ipo Owens imbwa inodada imbwa kugogogu inonzi Zeus, Biles ane maviri eFrance mabulldog anonzi Lilo naRambo. Owens anoti vana vavo vese vanga vava shamwari dzepamwoyo.
Simone Biles pamwe nevafudzi vake vechiGerman kumba.
Uye zvakare, Biles nemhuri yake maKaturike. Chikristu itsika yavo. Vanoenda kuchechi semhuri; kutenda kwavo kunoramba kuri chikamu chikuru chehupenyu.
Moreso, zvinokuvaraidza zvinosanganisira kutengesa uye kutandara neshamwari. Iye anofarira chikafu cheItaly, Pizza uye kuteerera mimhanzi iyo yaanofarira Justin bieber, Selena Gomez naJake Miller. Nekudaro, pane dzimwe nguva, Simone anofarira kuve ega, achizorora ari mumba make.
Zvinotoshamisa kuti anotya nyuchi. Pane imwe nguva, mushure mekugamuchira menduru yegoridhe ku2014 World Championship, mumwe menduru akanongedzera kuna Simone kuti nyuchi yaive mumaruva ake. Kuva anonakidza panguva iyoyo-ane makore gumi nematanhatu, akasekerera uye akasvetuka kubva pachikuva kuti atize dambudziko diki.
Yakakodzera kucherechedzwa, pamusoro pezvo, ndevemagariro enhau anotevera kuti Simone anotakura achitenderera naye. Iyo yakawanda-yakatumidzwa zita jimunasiti ine Instagram inotevera yemamirioni manomwe, nepo Twitter ichibuda kune vangangoita mamirioni maviri vateveri. Ndiwo maziso mazhinji anotarisa Champ.
Simone Biles Mararamiro:
Mutambi ane tarenda weOlympian anga ari mumwe wevatambi vane mukurumbira, vaine marekodhi ekutyora marekodhi. Yake gymnastics yaenda isingaenzaniswi mune yese yemitambo 'nhoroondo yakazara. Zvisingashamisi, kubudirira kwake kunoratidzira zvakanyanya muaccount yake yebhangi.
Kushingairira kwake kusvika parizvino kwakabhadhara. Simone Biles ine yake tambo yejimnastic michina. Iye anoita rondedzero mu Forbes pasi pemakore gumi nemasere.
Mune yake Instagram Nhau, iyo superstar yakaratidza yake inoshamisa, yakasarudzika mota inoshandurwa. Kunze kwekuravira kwake kwakapfuma kwemotokari, Simone akawana imba yakanaka muHouston. Paanogara ane dziva rakakura rekushambira uye tafura yekudyira yekunze padivi payo.
Kolaji inoshamisa inoshandurwa naSimone uye imba yake yemhando yepamusoro.
Simone Biles - Mari uye Net Kukosha:
Sekureva kweMukurumbira Net Kukosha muna 2021, kukosha kwaSimone Biles'net kuri madhora zviuru zvitanhatu. Iko kunooneka kwazvo kupinda kwemari kunobva mukubudirira kwake mumunda wake. Kubudirira kwake kweOlympic kwakapihwa mubairo nemari yemabhonasi sekurudziro.
Kudzoka muma2016 Olimpiki, menduru yega yega yegoridhe yakaratidza mutambi uyu $ 37,500 sechikurudziro. Menduru yesirivheri inopa mibairo yakaderera asi ichiri mari inokwana yemadhora mazana maviri nemazana mashanu emadhora yekupedzisira-pechipiri mumutambo weOlympic.
Sekureva kwemushumo weCNBC muna2018, izvi zviyero zvinoreva kuti nhamba dzeanokunda dzingave dzakanyanya kukwirira panguva ino kutenderera. Iyo Olimpiki inoita inofungidzirwa $ 316,000 pagore, sekureva kweVatambi Bio.
Simone Biles - Endorsements:
Kuhwina kwake kwakananga kwaive nemari zhinji kunaSimone Biles 'mambure akakosha muna 2021. Zvisinei, hapana zviripo kana ichienzaniswa nembiri yaakamuburitsa kunze kwenhandare yemitambo.
Sekureva kweWomen Health, Biles ane vanopfuura vashoma vashoma vevatsigiri vari kutsvaga kusunga zita ravo pamwe nemumhanyi wemitambo.
Aya marangi anosanganisira Beats naDre, Candid Dental, GK Elite, Hershey's, Oreo, Tide Pods, Kellogg's, Mattress, United Airlines Firm, SK-II, uye Uber Eats sezvakaita mune clip iripazasi.
Simone Biles Isina Chokwadi Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane trivia chokwadi pamusoro paDerrick Lewis icho chingafadza fancy yako.
Chokwadi # 1: Kushungurudzwa Pabonde kwevana.
Pane imwe nguva mumushumo, musikana anofara, giggly, uye ane simba pamoyo akaita chirevo. Simone Biles Yakagovana Tweet Hinting Larry Nassar Kushungurudzwa Kwaigona Kuve Yakapa KwaKe Hwepfungwa Hutano Kurwisana. Akareurura kuti akanzwa kuputsika nguva pfupi yadarika, aine mazwi mazhinji achipopota mumusoro wake.
Mushure mekunzwa nyaya dzakashinga dzevamwe vakapona, akaburitsa pachena kuti akatanga kushungurudzwa pabonde nemurume akapara mhosva pabonde uye aimbova chiremba wechikwata cheOlympic. Kunyangwe zvichinetsa pakutanga, Simone haatye kutaura nyaya yake futi.
Nyaya Dzakawanda Dzinotyisa Kubva Kuna Larry Nassar Kushungurudzwa Pabonde.
Chokwadi # 2: Ari wake Emoji:
Simone Biles ndiyo inonyanya kufambisa jimunasiti, sekuonekwa paGoogle. Mushure mekumukunda menduru yegoridhe yakatenderedza muRio, anga achifamba paTwitter ipapo, aine mbiri nehafu zvakapetwa kupfuura chero munhu. Iye anotove nema emojis ake anonzi Simoji.
A Simone emoji inonyanyo danwa kunzi Simoji.
Chokwadi # 3: Pfupi muRio Olimpiki:
Akamira pamakumbo mana chete-4-masendimita, Simone ndiye akapfupika kubva pavamhanyi vese makumi mashanu nevashanu vanomiririra United States muRio muna 9. Pano, anomira padyo nemutambi wevolleyball David Lee. Pana 555-tsoka-2016-inches, Lee ari kurovera tsoka mbiri kureba kupfuura Simone.
MuRio, aive mutambi mupfupi pane vese 555 vekuUS maOlympian.
Chokwadi # 4: Anorova akawanda "ekutanga.":
Akatoita nhoroondo achiri mudiki. Simone haasi iye chete mukadzi wekutanga jimunasiti kuhwina matatu epasirese-akapoterera mazita akateedzana, asi iye zvakare wekutanga Mutema jimunasiti kuve mukwikwidzi wepasirese wepasi rose.
Chokwadi # 5: Murairidzi mumwechete kubvira 8:
Gymnastics murairidzi Aimee Boorman akaona Simone rinenge gore mushure mekudzidziswa uye akabva angoona tarenda rake rechisikigo. Nekudaro, Aimee anga asati adzidzira seyemhando yepamusoro jimunasiti - chimwe chinhu icho Simone akaona sechinobatsira.
Akave nemurairidzi mumwechete kubvira aine makore 8.
Chokwadi # 6: Chisingakundike muhurongwa hwepasi:
Kunyange Simone ari mumwe wevanonyanya kukwikwidza mune zvese zviitiko, siginecha yake ndiyo tsika yepasi. Kudonha kwake kwekupfuura kwakanyanya kuomarara zvekuti kupunzika kwake kwechitatu kunonetsa kune vazhinji vanoita jimunasiti 'kutanga kupfuura.
Chokwadi #7: Anoda kuwana "basa chairo" mushure mekukwikwidza.
Tichifunga nezvemitambo uye kugona kunodiwa pamutambo, vanoita jimunasiti vane mabasa mapfupi. Pane vamwe, akataura, ini ndichafanirwa kuwana basa rakakodzera. Isu tinofungidzira kuti anozove anoshamisa pane chero chaanosarudza.
Achave anoshamisa pane chero chaanosarudza.
Chokwadi # 8: ADHD kuongororwa:
Mwedzi mumwe mushure mekuita nhoroondo kuRio Olimpiki, zvakavanzika zvaSimone zvekurapa kubva kuWorld Anti-Doping Agency dhata rakabiwa uye rakaburitswa. Iye jimunasiti akaenda kuTwitter kuti ataure nezve kubatwa senge mwana uye kutora mishonga inogamuchirwa neUSA Gymnastics.
Simone Biles akanyora kuti: “Kuva neADHD uye kushandisa mushonga hakusi chinhu chatinofanira kunyara nacho.”
Chokwadi # 9: Bhuku reBiography reNew Reader:
Memoir yakanyorwa nezvake kunzi, Iyo Nyaya yaSimone Biles. Iri bhuku rinosanganisira mabudiro akaita mutambi ane tarenda kubva achiri mudiki kuTexas kuenda kumumhanyi weOlympic uyo akabata menduru dzejimnastics kupfuura chero munhu munhoroondo.
Bhuku raSimone Biles rinosanganisira Mubvunzo unonakidza ― Edza ruzivo rwako nezvehupenyu hwejimunasiti uye bvunzo pfupi yekufukidza Ndiani, Chii, Kupi, Rini, Sei, uye Sei wenyaya yake.
Iyo Nyaya yaSimone Biles Bhuku reBiography reVaverengi Vatsva.
Chokwadi # 10: Trending mishumo yakaipa pamusoro pehama dzake:
Ashley Biles-Thomas ndiye mukuru hanzvadzi yeOlympic jimunasiti Simone Biles. Ane makore manomwe kukura kuna Simone uye anogara kuOhio. Vakaparadzaniswa Simone aine makore matanhatu.
Biles-Thomas akasungwa muDelaware County, Ohio, munaJune 2014. Maererano nemhosva yacho, anopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka, kusanganisira oxycodone uye oxymorphone. Vakapihwa mhosva yekushandisa zvinodhaka. Biles-Thomas akazobvuma mhosva yake kumhosva dzese.
Moreso, padare redzimhosva, Tevin Biles-Thomas, mukoma weOlympic jimunasiti Simone Biles, akabviswa nemhondi yekuponda mu2018. Chikamu chiri pazasi chinopa rumwe ruzivo.
Simone Biles Biography Pfupiso:
Kunyangwe zvese zvaakabudirira, Simone Biles achiri nezvakawanda zvakachengeterwa ramangwana rake, mune jimunasitikisi uye nedzimwe nzvimbo. Shandisa tafura iri pazasi kuti uwane pfupi pa-iyo-pekutarisa maonero eAfrican-American Gymnastic Champion.
Simone Biles Bio Dhata
Zita rizere: Simone Arianne Biles
Zuva rekuzvarwa: 14th Zuva raKurume 1997
Nzvimbo yekuzvarirwa: Columbus, Ohio, US
Hometown: Chitubu, Texas, US
Basa: Nyanzvi yekurovedza muviri.
Kuranga: Zvevakadzi zvehunyanzvi gymnastics
Baba: Ronald Biles
Amai: Nellie Cayetano Mifananidzo
Kutanga-Baba: Kelvin Clemons
Kutanga-Amai: Shannon Biles
Hama: Ronald Biles Jnr, Adam Biles, uye Tevin Biles
Sisters: Adria Biles uye Ashley Biles-Thomas
Hama: Harriet (Amainini), Silas naEvarista Cayetano (sekuru nasekuru)
Mukomana: Jonathan Owens
Hobbies: Kutenga uye kutandara neshamwari uye kuteerera mimhanzi.
kukwirira: 4 ft 8 mu (1.42m)
Net Worth: $ Miriyoni 6
Dzinza / Race: Mutema American
Residence: Chitubu, Texas, US
Nationality: American / Belizean
Social Media: @simonebiles (facebook), @simonebiles (instagram) uye @Simone_Biles
Mukuputira iyo Simone Biles's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Pasinei nehupenyu hwake hwakashata, ramangwana rakamupa mukana. Asi kwaari, haana kumboshandisa mukana uyu zvisizvo.
Wese munhu aripo anogona kuti, 'O, iwe unogona kuzviita,' asi ipapo pese paunotenda mazviri, ndipo pazvinoitika. Uye zvakare, imwe zvakare inofanira kunge isingatyi.
Tinotenda kuti iwe wawana Simone Biles's Biography uye Yehucheche Hupenyu Nyaya inonakidza uye inofadza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.